Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fambolena any Virginia - ara-dalàna ny marijuana any Virginia
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana mamboly Virginia
Raha te hianatra ny fahazoana Lisansa Virginia Cultivation ianao dia mila manamarina ny lalàna vaovao napetraka tamin'ny fanjakana momba ny programa marijuana fampiasan'ny olon-dehibe.
Vao tsy ela akory izay - tamin'ny 7 aprily- Ny HB 2312 sy ny SB 1406 dia nifidy mba hankatoavina taorian'ny nangatahan'ny Governemanta Ralph Northam fanitsiana tamin'ny mpanao lalàna.
Ity volavolan-dalàna ity dia hisolo ny fandrarana rongony amin'ny rafitra fanaovan-dalàna, hetra ary hifehezana ny rongony ho an'ny olon-dehibe 21 taona no ho miakatra.
Betsaka - saingy tsy izy rehetra - amin'ny lalàn'ny lalàna dia mitaky latsa-bato faharoa amin'ny 2022, na "fananganana indray." Ny fepetra hametrahana ara-dalàna ny fananana rongony sy ny fambolena amin'ny 1 Jolay 2021 dia tsy mitaky fampiharana indray, ary tsy misy koa ny sazy ho an'ny zaza tsy ampy taona manana rongony sy vatsy hamelana ny asa mifehy.
Ny fepetra hanombohana ny rafitra mifehy sy hanarahana ny ara-dalàna ny varotra amin'ny 1 Janoary 2024 dia tsy mitaky famerenana indray. Ny ankamaroan'ny sazy vaovao - toy ny fitondrana rongony any Virginia - do mitaky famerenana miverina.
Saingy inona no apetrak'ilay lalàna vaovao momba ny Fahazoan-dàlana hanangana marijuana any Virginia?
Inona ny fahazoan-dàlana mamboly marijuana?
Nahazoana alalana amin'ny fambolena marijuana manome alalana ny mpahazo alàlana hamboly, hanao marika ary handefasana marijuana antsinjarany; mividy na maka zavamaniry marijuana sy masomboly amin'ny toeram-pambolena marijuana hafa; famindrana marijuana antsinjarany sy fivarotana marijuana tsy matotra ary ambioka marijuana amin'ireo mpivarotra marijuana; mamindra ny fananana sy mivarotra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana, ary masomboly marijuana amin'ireo toeram-pambolena marijuana hafa; ary hivarotra zava-maniry sy masomboly marijuana tsy matotra amin'ny mpanjifa mba hambolena rongony an-trano hampiasaina manokana.
Ny lalàna vaovao farany dia manangana kilasy fahazoan-dàlana hamboly marijuana roa:
Fambolena kilasy A.: Manome alalana ny mpahazo alalana hamboly zavamaniry marijuana na marijuana maromaro amin'ny faritra tsy lehibe noho ny faran'ny metatra toradroa, araka izay notendren'ny Birao;
Fambolena kilasy B: Manome alalana ny mpiantoka fahazoan-dàlana hamboly zava-maniry marijuana amin'ny fatran'ny tetrahydrocannabinol tsy mihoatra ny iray isan-jato, toy ny dec -boxboxation efa voafaritra.
FIVAVAHANA MISY: LISENY MAINE MARIJUANA: FOMBA FANAMPIANA
FIVAVAHANA MISY: LISENSY CANNABIS MINNESOTA
Ahoana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana hamboly marijuana any Virginia
Ny lalàna dia nankatoavina ny volavolan-dalàna momba ny volavolan-dalàna senat 1406 sy Trano Bill 2312 nanao an'i Virginia ho fanjakana atsimo voalohany nanangana ara-dalàna ny fananana sy fampiasana marijuana ataon'ny olon-dehibe.
Na dia manomboka ny 1 Jolay 2021 aza ny olon-dehibe dia afaka mahazo marijuana hatramin'ny iray grama ary mamboly zavamaniry rongony efatra isan-tokantrano, ny Virginia Cannabis Control Authority dia tsy handray lalàna mifehy ny fahazoan-dàlana alohan'ny 1 Jolay 2022, raha ny fahazoan-dàlana Tsy hisy ny fizotrany raha tsy amin'ny 1 Jolay 2024.
Amin'io lafiny io dia voafetra ihany ny fampahalalana momba ny fizotry ny fahazoan-dàlana ao amin'ny SB 1406 sy HB 2312 ary azo ampiharina amin'ny karazana lisansa rehetra.
Araka ny HB 2312, ny fizotry ny fahazoan-dàlana dia manomboka amin'ny fametrahana fangatahana amina endrika natolotry ny fahefana rongony ary fanambarana an-tsoratra nataon'ilay mpangataka nianiana ary nanamafy fa ny fampahalalana rehetra ao anaty fangatahana dia marina.
Raiso an-tsaina fa raha mangataka fahazoan-dàlana hanangana orinasa ianao izay mila fanaraha-maso avy amin'ny Departemantan'ny Fambolena sy ny Serivisy ho an'ny mpanjifa, dia mila manome porofo fanamarinana na porofon'ny fangatahana fangatahana fanaraha-maso ianao. Afaka mahazo fahazoan-dàlana ianao fa tsy afaka mivarotra vokatra rongony raha tsy vita ny fizahana.
Ny mpangataka rehetra dia mila mandefa fampandrenesana momba ny fangatahana azy eo am-baravaran'ny trano, toerana na efitrano naroso hirotsahana amin'izany asa izany:
Ny fanamarihana dia ho hita tsy mihoatra ny 30 andro ary tsy latsaky ny 10 andro.
Ny habe sy ny fampahalalana dia ho hitan'ny manam-pahefana manome alalana marijuana ampiasain'ny olon-dehibe
Ny fanoherana rehetra dia tsy maintsy apetraka amin'ny tompon'andraikitra fahazoan-dàlana tsy mihoatra ny 30 andro aorian'ny fandefasana ny fampandrenesana voalohany
Ny mpangataka dia tsy maintsy mamoaka fanamarihana farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny tapa-bolana amin'ny gazety navoaka na manana fielezana ankapobeny ao amin'ny distrika, tanàna, na tanàna misy ilay orinasa.
Ny fampahalalana voarakitra ao amin'ilay fampandrenesana dia hofaritan'ny tompon'andraikitra manome alalana marijuana ampiasan'ny olon-dehibe.
Ny fanoherana rehetra dia tsy maintsy apetraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana alohan'ny 30 andro aorian'ny famoahana ny gazety voalohany
Ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana marijuana ampiasain'ny olon-dehibe dia tsy maintsy manao fizahana ifotony ny mpangataka tsirairay hahazoana fahazoan-dàlana, izay misy ny fikarohana ny rakitsoratra tantara an-tsokosoko, ao anatin'izany ny fikarohana ny firaketana ny tantaram-pirenena momba ny heloka bevava.
Ny birao dia mety hanafoana ny takiana amin'ny fizahana ifotony raha toa ka misy antony tsara aseho.
Ny mpangataka iray dia tsy azo disqualifié noho ny faharesen-dahatra taloha noho ny heloka mifandraika amin'ny rongony.
Ny manampahefana misahana ny marijuana dia mila mampandre ny filan-kevi-pitantanana eo an-toerana isaky ny fangatahana fahazoan-dàlana, ary ny filan-kevi-pitantanana eo an-toerana dia tsy maintsy manohitra ny fanomezana fahazoan-dàlana ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fametrahana ny fangatahana
Ny fampahalalana momba ny sarany fangatahana dia tsy misy amin'izao fotoana izao, ny tompon'andraikitra misahana ny marijuana dia miandraikitra ny fametrahana ny sarany. Na izany aza, HB 2312 dia manome ireto fampahalalana manaraka ireto momba ny saram-pisoratana anarana:
Mitaky ny handoavana azy ireo amin'ny fotoana anaovana ny fangatahana (ankoatry ny hoe avela na ahena ny sarany ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy mendrika).
Ny sarany dia ho fanampin'ny tena vola naloan'ny FBI na ny Central Criminal Records Exchange ho an'ny fikarakarana dian-tànana isaky ny fizahana ifotony.
Ny sarany dia ho fanampin'ny saram-panjakana ary tsy haverina.
Ny Birao dia manana fahefana hampiakatra ny saram-panjakana. Ny Birao dia mamaritra ny habetsahan'ny fiakarana toy izany amin'ny alàlan'ny index an'ny vidin'ny mpanjifa ary tsy hampiakatra sarany mihoatra ny indray mandeha isaky ny telo taona. Alohan'ny hampiharana ny fiakaran'ny saran'ny fanjakana, ny Birao dia hanome fampandrenesana ho an'ireo manana fahazoan-dàlana rehetra sy ny sarambabem-bahoaka (i) ny fikasan'ny Birao hametraka fiakarana sarany ary (ii) ny sarany vaovao takiana amin'ireo lisansa voakasiky ny Miakatra ny sarany natolotry ny birao. Ny fampandrenesana toy izany dia omena amin'ny na alohan'ny 1 Novambra amin'ny taona izay nanapahan'ny Birao hevitra hampiakatra ny saram-panjakana, ary izany fiakarana izany dia hanan-kery amin'ny 1 Jolay amin'ny taona manaraka.
Ny manana fahazoan-dàlana rehetra dia tsy maintsy mametraka sy mitazona miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana marijuana, rakitsoratra marim-pototra momba ny vaovao ilaina amin'ny fahazoan-dàlana ary hampandre ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana ny fanovana rehetra toy izany mifanaraka amin'ny lalàna mifehy.
Ny fangatahana fahazoan-dàlana rehetra dia tokony hatao amin'ny endrika omen'ny tompon'andraikitra misahana ny fahazoan-dàlana.
Fitsipiky ny fanjakana
Hiorina amin'ny Jolay 2021 ny fahefana vaovao mifehy ny rongony mba hifehezana ny tsenan'ny rongony ampiasain'ny olon-dehibe. Ny filankevi-pitantanana iray dia hamoaka fitsipika; manome, mampiato na manafoana ny fahazoan-dàlana.
Ny manampahefana misahana ny marijuana dia tsy maintsy mametraka ny isan'ireo manana fahazoan-dàlana, ireo fahazoan-dàlana dia tsy afaka mihoatra ireto isa manaraka ireto:
Mpivarotra: licence 400
Mpivarotra ambongadiny: fahazoan-dàlana 25
Mpamboly: fahazoan-dàlana 450
Mpanamboatra vokatra: fahazoan-dàlana 60
Ireo tarehimarika ireo dia tsy jerena ny orinasa rongony ara-pahasalamana sy mpanodina hemp.
Ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana ihany koa dia hametraka fepetra hanombanana ireo manana fahazoan-dàlana vaovao mifototra amin'ny hakitroky ny fivarotana antsinjarany ao amin'ny fiarahamonina ary handinika izay vokadratsin'ny fahasalamam-bahoaka ratsy eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fampidirana vertika (fananana orinasa marobe rongony) dia tsy azo avela raha tsy amin'ny tranga:
Orinasa rongony ara-pitsaboana efa misy ankehitriny, izay miharo vatan-kazo avokoa, ary ny mpandahatra hemp dia mety hampidirina mitsivalana raha toa ka: 1) mandoa vola $ 1 tapitrisa amin'ny Tahirim-bola mpampindram-bola Virginia Cannabis sy ny tahirim-bola fampidiram-bola Virginia Cannabis Equity Reinvestment Fund; ary 2) ny orinasa dia mandefa drafitra fahasamihafana, fitoviana ary fampidirana ho an'ny ekipa Mpanohana rongony sy mpifanaraka amin'ny varotra rongony ary mampihatra izany na manome serivisy fanofanana asa ho an'ireo olona nogadraina.
Ireo fivarotana any amin'ny fanjakana dia tsy maintsy aparitaka ara-jeografika. Ny fanaparitahana azy ireo dia mila averina jerena aorian'ny lisansa 100 isaky ny manome.
Ny volavolan-dalàna dia mampiroborobo ny fampidirana amin'ny laharam-pahamehana ireo mpangataka ny ara-tsosialy. Ny volavolan-dalàna dia mamaritra ny “mpangataka fitoviana ara-tsosialy” ho an'ireo manana tompona 66% na mihoatra izay:
Manana faharesen-dahatra mialoha ny rongony
Manaova havana akaiky miaraka amin'ny fanamelohana rongony
Mipetraha na amin'ny faritra misy fisamborana rongony tsy mifandanja na sahirana ara-toekarena
Nahazo diplaoma tamin'ny Virginia HBCU
Ny mpangataka ny ara-tsosialy dia homena tombony manomboka ny 1 Jolay 2023 hatramin'ny 1 Janoary 2024. Hotsipahin'ireo mpandamina ihany koa ny isan-jaton'ny saram-pitsarana.
Fitsipika fanampiny napetraka ao amin'ny volavolan-dalàna
Ankoatr'izay, ny volavolan-dalàna dia mamorona ekipa mpamatsy vola sy rongony isan-karazany ao Cannabis hamantarana ireo sakana amin'ny fampidirana, hanolotra fanampiana ara-teknika, hitarika fanentanana, ary hamolavola ny fepetra takiana amin'ny drafitra fahasamihafana, fitoviana ary fampidirana.
Fikambanana mpanolotsaina fahasalamana ho an'ny daholobe vaovao 21-mpikambana dia hanombana sy hanara-maso ny fiantraikan'ny fahasalamam-bahoaka ary hanao tolo-kevitra, ao anatin'izany ny fampitandremana momba ny fiarovana ny vokatra rongony sy ny famokarana vokatra ary ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalamam-bahoaka.
Ny volavolan-dalàna dia misy ny fepetra takiana amin'ny fanaraha-maso voajanahary, famonosana ary fametahana marika, ary mitaky fampahalalana noforonin'ny fanjakana momba ny loza mety hitranga amin'ny fivarotana.
Ny lalàna dia mifehy ny fambolena, ny fidiovana, ny fanandramana ary ny dokambarotra any ivelany.
Ary farany, hametraka torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny besinimaro ho an'ny fambolena ao an-trano ny mpanara-maso, anisan'izany ny fiarovana ny ankizy sy ny fisorohana ny fanelingelenana, anisan'izany ny fofona.
Fotoam-potoana amin'ny volavolan-dalàna
Ny ankabeazan'ny volavolan-dalàna - ao anatin'izany ny fananana ara-dalàna - dia hanomboka amin'ny 1 Jolay 2021. (Ny sazy mihatra ankehitriny noho ny fananana hatramin'ny iray grama dia onitra sivily hatramin'ny $ 25.)
Hanomboka alohan'ny 1 Janoary 2024 ny varotra.
Hetra napetraka amin'ny volavolan-dalàna
Ny fandoavam-bola dia ho faritan'ny Birao ary azo ampitomboina amin'ny ination.
Aorian'ny fandrakofana ny vidin'ny lalàna mifehy, ny vola azo dia atokana ho an'ny: fanabeazana alohan'ny K ho an'ny ankizy atahorana (40%); Vola famerenam-bola momba ny rongony rongony (30%); fitsaboana sy fisorohana zava-mahadomelina (25%); sy programa momba ny fahasalamam-bahoaka (5%).
Ny Fund Cannabis Equity Reinvestment Fund, tarihin'ny Birao Reinvestment Equity Cannabis Equities 20-member, dia hitarika vola mankany:
Fandaharam-pianarana ho an'ny vahoaka voahilikilika ara-tantara, ao anatin'izany ireo izay efa nitaiza sy nisy fiantraikany tamin'ny fampiasana zava-mahadomelina;
Famatsiam-bola hanohanana ny fiofanana momba ny asa sy ny fametrahana azy, ny fampandrosoana ny toeram-piasana, ny fanomezana torolàlana ho an'ny tanora ary ny serivisy fidirana ao amin'ny oniversite;
Mandray anjara amin'ny Tahirim-bolam-panjakana miaro ny mahantra; SY
Fampindram-bola tsy misy zanabola sy ambany ho an'ny mpangataka fananana ara-tsosialy.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hidirana amin'ny indostrian'ny rongony any Virginia, aza misalasala Mifandraisa aminay.
FIVAVAHANA MISY: CONNECTICUT CANNABIS LICENSE FANORENANA
FIVAVAHANA MISY: LICENSE DISTRIBUTORATRA JERIA Vaovao